Bible Nkɔmhyɛ a Anya Mmamu Nnɛ
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Armenian (West) Aymara Bislama Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Danish Drehu Dutch Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish French Ga Georgian German Greek Guarani Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kazakh Kikaonde Kikongo Kikuyu Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kongo Korean Lingala Lithuanian Luganda Luo Luvale Macedonian Malagasy Maya Myanmar Ngabere Norwegian Nyaneka Nzema Oromo Ossetian Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Polish Portuguese Quechua (Bolivia) Rarotongan Romanian Russian Samoan Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tatar Thai Tigrinya Tok Pisin Totonac Tshiluba Tsonga Tswana Turkish Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Umbundu Vietnamese Wallisian Xhosa Yoruba Zapotec (Isthmus) Zulu
Adɛn nti na Bible kaa nsɛm a ɛresisi yɛn bere yi so ho asɛm?—Luka 21:10, 11.
Sɛ yɛhwɛ Bible mu a, nkɔmhyɛ pii ahyɛ mu ma. Onipa biara ntumi nka daakye ho asɛm pɛpɛɛpɛ da. Enti, Bible nkɔmhyɛ a anya mmamu no yɛ adanse a ɛdi mũ a ɛkyerɛ sɛ Bible no yɛ Onyankopɔn Asɛm.—Kenkan Yosua 23:14; 2 Petro 1:20, 21.
Bible nkɔmhyɛ a anya mmamu no ma yɛnya nea yɛbɛgyina so anya Onyankopɔn mu gyidi. (Hebrifoɔ 11:1) Ɛsan nso ma yɛnya awerɛhyem sɛ, ɛbɔ a Onyankopɔn ahyɛ fa daakye a ɛyɛ anigye ho no bɛbam. Ɛno nti, Bible nkɔmhyɛ ma yɛnya anidaso a ɛdi mũ.—Kenkan Dwom 37:29; Romafoɔ 15:4.
Bible nkɔmhyɛ boa yɛn sɛn?
Nkɔmhyɛ no bi bɔ Onyankopɔn asomfo kɔkɔ ma wɔyɛ biribi. Nhwɛso baako ni, bere a Kristofo a wɔtenaa ase wɔ Yesu bere so no huu sɛ nkɔmhyɛ bi anya ne mmamu no, wɔdwane firii Yerusalem. Akyiri yi, wɔsɛee kuro no efisɛ nnipa dodow no ara annye Yesu anni; nanso saa bere no na Kristofo no wɔ akyirikyiri baabi, na na wɔwɔ ahobammɔ.—Kenkan Luka 21:20-22.
Ɛnnɛ, nkɔmhyɛ a anya mmamu ma yɛhu sɛ, ɛrenkyɛ Onyankopɔn Ahenni bɛsɛe nnipa ahenni ne aban ahorow nyinaa. (Daniel 2:44; Luka 21:31) Enti ɛho hia sɛ obiara bɔ mmɔden sɛ ɔbɛyɛ ade a ɛbɛma wanya Yesu Kristo, Ɔhene a Onyankopɔn apaw no no anim dom.—Kenkan Luka 21:34-36.
Bible Onyankopɔn Ahenni
Text Baabi a wubetumi atwe nneɛma akenkan ƆWƐN-ABAN Hwannom Ne Yehowa Adansefo?
Audio Baabi a wubetumi atwe nneɛma abɔ atie ƆWƐN-ABAN Hwannom Ne Yehowa Adansefo?
ƆWƐN-ABAN Hwannom Ne Yehowa Adansefo?
Nkɔmhyɛ Ahorow a Abam